Plasterer kuti mabasa
Anowanzoitwa Muvaki anenge vatopa zvose masaga Gypsum varinamire hunozodiwa, uyewo chero zvekunze wemvura kana imba haisati zvakabatana. The plastering vashandi anofanira kuuya zvokushandisa zvavo uye midziyo uye dzimwe nguva kupa pachavo bead kwavo.
Mabasa kuti plasterer inowanzopiwa kutarisirwa kuita.
The plasterer Kazhinji fanira kutanga sadza kana chipini Cornerbead pana ose yakabudikira (kwokunze) pakona mukati imba. Care anoendeswa nechokwadi ichi zvinoita rusvingo ngaatarire uye zvakawanda ane unyanzvi ziso pane chinhu chimwe.
"Bead" anouya zvitaera zhinji; Kubvira waya pajira riya akabatana ne zvinodyiwa kuti kwakanyanya simbi mamakisi zvinofanira tacked mberi zvipikiri. Plastic mhando kuvapowo.
The bead anofanira kuyerwa uye akatema kuti kukura; Kutarisirwa chinobviswa kwete kufonyora kana avhiringidze nayo. Munzvimbo umo vanopfuura mumwe mukona akasangana; ari bead wacho kumigumo dzinobviswa pane necheparutivi uye 2 kana kupfuura mazano anoiswa sezvo pedyo pamwe chete sezvo zvinobvumidzwa; bata asi kwete pindana. The bead chakafukidzwa chose nesuko uyewo vamwe parusvingo uye varinamire kunobatsirawo kuiita zvakasimba. The rakapedzwa chigadzirwa mashizha chete chiduku vakafumura chesimbi ubvise panguva protrusion wekona iyo chinozadzwa akafukidza kana rusvingo vakarondedzera. Izvi kunosiya yakachena, yakarurama zvake rekona.
An nzira nzira kuonekwa mudzimba vakuru wezvamatongerwe woita kana bullnosed pakona anoshandisa quirked yemapuranga mudonzvo bead. Tsvimbo bead, 1 padiki dowel pamwe approx 1/3 akavewura musana, zvinoiswa pamusoro kwokunze pakona parutivi joiner panzvimbo, zvakabatanidzwa yematanda plugs kuisa mukati zvidhina / chinogumbura vazvo, kana kuti huni puranga. Varinamire ari kumhanyira kuti mudonzvo bead uye akacheka kwaunogara kudzokera bead kana "quirked" kudzivisa simba neminhenga unopinza apo varinamire remhosva bead.
In akitekicha rimwe quirk duku 'V' kuumbwa mugero inoshandiswa putira uye kupa ruyamuro kune convex woita Kuumbwa. Kusika wakanamira wekona, kutsigira jasi (Browning) iri wakanamira kuti mudonzvo bead, ipapo quirk unotemwa kupinda achitsigirwa jasi dzakakura zvishoma kupinda rakapera kukura. Kana pamusoro skimming jasi rinoshandiswa, zvakare bead zvizere skimmed uye ipapo, uchishandisa yakarurama unopinza, kuti quirk iri kuzodzosera akatema kuti rakapedzwa kudzama, kazhinji musi imwe anofungidzirwa 45 dhigirii pakona kupinda bead. The quirk achandichengeta pakupedzisira mutswe duku pakati mudonzvo bead uye varinamire zvichaita kuumba.
The plasterer anofanira kuzadza munhu 5-gallon Mugomo zvishoma nemvura. Kubva bhakiti ichi Anorembera trowel ake kana trowels uye nzvimbo mariri Ezvemutauro siyana.
Kazhinji plasterer ane trowel kuti "nokuiswa" (muitiro pakugovera madhaka pana parusvingo).
Vamwe ipapo chengeta yakwegura trowel kuti ane rakanaka vanobwembura mariri (mabhanana munyonga) kudirwa chinangwa "texturing"; kana akadana nokuti nemba. A pasi-pasi trowel ruchigona wakanyanyisa sandara nokuda ichi uye Vacuum anokonzerwa mvura anogona kuramba kuti parusvingo, kumumanikidza kuti ribvise kure uye nokudaro anofanira rework munharaunda.
Pakupedzisira, mumwe angava hachizi trowel itsva "asati kuputswa-mu" raachashevedzwa kushandiswa "vachikuya"; uyu kana varinamire kutopera mikukutu uye ari rimire kubuda chero anorovera kana kuzadza chero dips diki (katsi anotarisana) kuti rusvingo Kutarira wakafanana yunifomu Pepa vaima chena purasita.
Plasterers Most vane zvavo zvinodiwa kuti kukura trowel vanoshandisa. vamwe kuashandisira trowels kwakaenzana 20 nemasendimita refu asi ndozvakajairwa sokuti kuva 16 "× 5". Kubva ruzivo rwangu nzvimbo muchiso ari Marshalltown Stainless simbi. Vane brassy kubwinya kwavari, mumwe rabha mubato haangazvidembi richiita kana ngura kana netsaona kusiiwa mvura usiku hwose apo vamwe vanosarudza nguva trowel kuba kunoda zvakawanda Nokuraramisa asi rinovapo kwenguva refu uye pitting anogona kupa izvozvo " kuruma "kuti anobatsira apo" kupedza "(rokupedzisira vanopfuura kana varinamire ari kuisa).
Into bhaketi uyewo anoenda hombe bhurasho anoshandiswa nokusasa mvura mumutinhiro parusvingo uye kuchenesa zvokushandisa ake, mumwe pendi bhurasho kuti rimire makona, uye shiri pakona yokuva pamakona (kunyange vazhinji mugove mumwe shiri zvakanaka kuchengeta nzvimbo zvinopindirana).
Izvi turusi migomo vanotanga vakaramba pedyo patafura kunovhengana uye sezvo varinamire anotanga kuisa vanozoona pedyo rusvingo kuti kuitwa ashanda. Time anova wakanyanya pano sezvo kamwe ari varinamire anotanga kuomesa (yakatarwa) Zvichafadza kudaro zvakarurama nokukurumidza uye plasterer ane diki kumucheto kwokukanganisa kuti rusvingo pachaenzaniswa.
Kupinda patafura vaiitawo yacho plasterer kazhinji anogadza "rukodzi" ake saka zvichaita batsira kana anofanira dzinovabata uye kuramba tsvina kure nayo. Chero Marara ari varinamire kunogona kuva huru chigumburo.
Varinamire misoro kana pasi?
Plasterers zvichaita yemanyorero vagovane kamuri, (kunyanya hombe kana mukuru-ceilinged rusvingo) kupinda kumusoro uye pasi. Munhu kushanda pamusoro achaita kubva kumusoro wacho kumuganhu kusvikira pamusoro dumbu kukwirira uye kushanda kubva mukaka crate ive 8-rutsoka (2.4 m) sirin'i, kana kushandira kure stilts kuti 12-rutsoka-soro dzimba. Nokuti Chiesa ceilings kana nemasvingo marefu kwazvo, inoshandiswa pakutsigira rinoumbwa uye mumwe anoshanda topside, zvimwe pazasi.
Kugeza vasati kupedza basa
chinowanzoitika aita pamwe mushandi. No varinamire globs vakasiiwa uriri, masvingo kana rekona bead kumicheto. (Ivo acharatidza kana kupendwa uye kuvhiringidza flooring uye kudimburira). Bvisa kana neatly vanounganidza zvose marara.
makamuri All uye masvingo iongororwe kuti cracking walnut uye netsaona kana anokwenya kuti angave akaita vamwe bumping kupinda masvingo. Vanewo iongororwe nechokwadi hapana anorovera vakasara pamadziro kubva vakasasa kupurasita kana mvura. Makamuri All vari kuongororwa kuti tive nechokwadi varinamire zvose zviri agogodza kubva nehoro kuitira magetsi anogona kuisa zvigadziko uye kuti chokwadi hapana zvokushandisa akasara shure. Izvi anosiya kugadzirira Painters uye finishers kupinda uye kuita zvokutengeserana kwemasvingo avo.
Interior plastering unyanzvi
The muridzi musha uye plasterer wacho webasa kazhinji kusarudza pakutanga chii zvitaera vachagara kushandisa mumba. Yemanyorero masvingo inotsvedzerera uye dzimwe nguva ceilings. Kazhinji aiva nemba kuchaita vasarudze kuti ceilings inoshandisa "unaku" unyanzvi sezvo zviri nyore zvikuru, akasiya, uye nokudaro isingadhuri kupfuura wakatsetseka siringi.
The plasterer prices mitengo pachishandiswa unyanzvi kuti kushandiswa uye bhodhi tsoka kuti rakafukidzwa kuna Muvaki kana nemba basa isati yatanga. The bhodhi tsoka inotengwa nokuda hanger kana zvinofungidzirwa musoro subcontractor kuburikidza pasingaverengwi wallboards munopinda imwe indasitiri mureza 8 'kusvika 12' refu. Anobva awedzera mune mamwe nemari soffits uye Chiesa ceilings.
Ceiling yechipiri kana kutanga
chinowanzoitika kana pasirin'i kuva kumeso kwakanyorwa pakutanga zvaitwa, pamberi masvingo. Kana kuti textured, zvaitwa pashure masvingo.
Chikonzero ichi ndechokuti kunokonzeresa kana sirin'i ari akashanda nesuko achawa vosasa angonanga masvingo. Zvisinei mumwe unaku kunovhengana hakudi kuti ndokudzora panze apo anotanga kuronga:
Saka retardant akadai "Cream kuti tartar" kana shuga zvinogona kushandiswa kurebesa marongerwe nguva, uye iri nyore ngaarayire kure masvingo.
uye sezvo nguva iri kwete pakudzora ane chinhu pamusoro textured ceilings kongiri guru, kana shure-kuti-musana mixes zvinogona kuitwa uye ceilings zvose akafukidza panguva imwechete.
chimwe chikonzero ndechokuti shiri inowanzopiwa dzinomhanya pamusoro pakona pashure kuita remba mvere, ipapo zviri nyore kuramba kumucheto ichi nokuita rusvingo rokupedzisira. Asi textured sirin'i kazhinji hakudi kuti birded, chete sezvaiita mu aine nyoro zvikuru pendi bhurasho. Panyaya iyi rusvingo wekutanga kuitwa uye pakona akaumbwa shiri.
Chinhu chokutanga kuti plasterer ruchigona kuita kuenda pamusoro zvose pajira riya-taped vazvo masvingo ari kuda kufukidza; ari mutete chaizvo swatch. The wallboard anokwevera mwando kubva ubvise ichi saka kana plasterer anoenda pamusoro payo zvakare kana kuita vamwe rusvingo izvozvo havazosiyi chinhu mukati musono chinoda mamwe reworking.
Anobva anozadza munharaunda pedyo pasirin'i saka iye havazofaniri ruoko kusvika panguva vakasara parusvingo; Iye anoumba pakona pamwe shiri yake. Izvi anoponesa zvikuru vaida nguva sezvo izvi zviri rudzi pamusoro makemikari zvakaitwa.
Kubva patafura kunovhengana yacho plasterer scoops vamwe "madhaka" padenga musimboti rukodzi yake trowel ake. Wakabata yegungwa yake kure-ruoko rwake trowel yake chikuru ari plasterer ipapo scoops ane bulging yakapetwa nesuko zviende trowel ake. ichi zvinotora zvishoma tsika tenzi, zvikurukuru soupy mixes.
Ipapo wakabata trowel newokuti parusvingo uye pane zvishoma pakona pamusoro chiningoningo anoedza noruvara vagokungurusa varinamire zviende parusvingo. Nenzira yakafanana squeegee. Anotanga pamusoro suduru pamusoro pasi uye mabasa nzira kumusoro kusvikira kumusoro. Care anoendeswa kuva yunifomu sezvinobvira sezvo zvinobatsira mune chose chokutambudzika.
Zvichienderana pakaitika nguva purasita. Pakarepo mwando ari varinamire kunotangira kuti vauye bhodhi bhora yechipiri yakaitwa. ichi anonzi tichigogodza pasi. zviri kungofanana nokushandisa pendi pamwe chinotenderera mu chiningoningo chiito uye chinangwa. kuti iti chechetere chero mitsetse uye zadzisa chero voids zvikuru kuti achaita kuti imwe basa kamwe chete varinamire anotanga zvechokwadi kuisa. dukuduku kumanikidzwa rinoshandiswa uye trowel rwokuchengeta nekaupenyu sandara kurutivi rusvingo.
Dzimwe nguva accelerant zvichawedzerwa kongiri kuchimbidza nguva kunonoka kubva pakutanga vaiitawo danho kuti kana varinamire anotanga kuisa. Izvi dzinowanzoona kuitwa mazuva inotonhora kana kuisa iri kunonoka kana kuti mabasa maduku kurerutsa kumirira.
Pakangotanga varinamire riri parusvingo uye otanga kuisa (ichi inogona pakutsvaga tafura chinosunungura pakutanga), kuti plasterer gingerly anosasa mvura mumugwagwa parusvingo; izvi zvinobatsira kungomira pakati pokushanda kwayo marongerwe uye kusika kapepa. Anobva anoshandisa trowel ake uye kazhinji wetted akanzwa bhurasho rakaitirwa zvakasiyana ruoko uye asingaremekedzwi anobata rusvingo mberi trowel kushanda pitikoti ichi munzvimbo chero makwanza diki (aizivikanwa se "catfaces") ari varinamire uyewo iti chechetere kuenzana muise pamusoro uye deredza chero mhepo matema kuti kuumbwa panguva kuronga.
Iyi ndiyo nguva inokosha nokuti kana rusvingo rikawana kukuomerai kwava zvisingaiti zadza chero makwanza sezvo pitikoti haangazodzingi akaiswa parusvingo uye achaita pachinzvimbo chete yakaoma uye kuwa panze. Izvi zvinotungamirira kudiwa zvinonzi "kukuya" somunhu anofanira kuenda pamusoro porusvingo zvakaoma zvakare uye zvakare kuedza iti chechetere vakaomesa parusvingo uye chero catfaces zvikuru inofanira kuzadzwa muna aine gandiwa putty, vadyi remubatanidzwa, kana reworked nokuda ndokusanganisa nenzira yakachena, mutete jasi.
The rakapedzwa rusvingo vachatarira vaima uye noruvara sandara uye riri kumeso kuti ikabatwa. Pashure pemazuva mashoma zvichava chalky chena uye inogona kupendwa pamusoro.
Kubva panguva masaga vari dumped kupinda dhiramu kuti kana rusvingo wakaiswa zvachose anonzi kongiri. Kusiyanisa pamusoro Nzira yaishandiswa uye kana accelerant kana retardant iri akawedzera, kongiri yemanyorero kwazvinogumira kwemaawa maviri.
Okupedzisira nguva ndiwo-mhanya zvakanyanya kupfuura kana zviri kumeso kana kana mix achikusunungurai anokurumidza kupfuura zvaitarisirwa. Kana izvi zvaitika zvinonzi mix yave "akadambura" uye dzinowanzoona kukonzerwa kushandisa akwegura chigadzirwa kana siyana okunze (mwando kana kupisa mazuva angaita varinamire kuisa anokurumidza). Kazhinji matatu chete kana mana mixes zviri kuitwa zuva sezvo plastering riri unonetesa chaizvo uye hainyanyoshanda pasi tyisa chiedza mumwedzi pamwe mangwanani rufuramhembwe.
Plastering zvinoitwa gore rwakapoteredza asi matambudziko akasiyana angamuka kubva mwaka nemwaka. Muchirimo, kupisa ruchigona kuti varinamire yokuvira nokukurumidza. The varinamire zvakare zvinowanisa yayo kupisa uye dzimba vanogona kuva kwazvo hellish. Yemanyorero ari varinamire rikarira achaedza vanosvika pamba zvakanaka pamberi mambakwedza.
Mumwedzi yechando, pfupi mazuva muchiswededza kuda kubata chiedza. Zvimwe pamakona zviedza izvi zvinogona kuita kunyange smoothest rusvingo Kutarira wakafanana pechiso mwedzi. Chimwe chinetso mumwedzi yechando iri vanofanira kushandisa propane ndege Heaters (zvinogona aizonyatsovachenesa iri varinamire yellowish asi regai zvimwe kutadzirwa), kwete kuchengeta plasterers inodziya asi kuti kudzivirira mvura kunovhengana kubva kuoma nechando uye generating chando crystals isati varinamire ane nguva yokuvira. Uyewo kana mvura hosipaipi hauna vakapedzwa kwazvo asati kusiya rinogona -oma pamusoro usiku uye zvachose akavhara mangwanani.
Texturing ari zvaiwanzochengeterwa dzemukati, ceilings uye garaji masvingo. [Citation zvinodiwa]
Kazhinji munhu retard mumiririri inowedzerwa kongiri. ichi dzinowanzoona Cream kuna Tartar (kana "Dope" iri plasterer wacho jargon) uye nokutarisira anofanira kubatwa mari yakawedzerwa. Zvakawanda uye mix anogona harinyuri zvachose. Asi mari inoshandiswa zvinowanzooneka vanofungidzirwa; zvikuru nzira imwe inowedzera nokuputsanya yomunyu kuti yokubika. iwe wedzera chiduku Scoop pakati retarder, novimba kukura mix. Retardant iri akawedzera kuti makuru mixes anogona kuitwa, sezvo unaku unyanzvi hakurevi kuti munhu amirire kusvikira anotanga chandingamuperekera kushanda nayo.
The pasi-pasi danho kwakafanana kumeso asi akawedzera ane nguvo mukobvu. Kamwe nguvo iri noruvara ari plasterer ipapo odzokera uye shiri makona ake. Kuramba kubva pakona ipapo awana trowel pamwe akanaka mabhanana munyonga mairi uye otanga kumhanya pamusoro porusvingo ari mufananidzo sere kana Ess muenzaniso, nechokwadi kuyambuka kunzvimbo dzose kanenge kamwe. Anowedzera zvishoma zvokuwedzera varinamire kuti trowel yake kana zvichidiwa. Zvinonyatsorehwa nezvinozoitika akaturikidzana wependi-kufanana swaths pamusoro yose pasirin'i kana pamadziro. Anogona zvino chete kufamba kure uye ngaanyoroveswe yakaiswa nokungwarira wakatorwa hauziri kusiya chero globs uye kuti chokwadi makona kutarisa kumeso uye Linear.
Kana rusvingo kuva kumeso uye denga remba textured, yemanyorero rusvingo kutanga zvaitwa, ipapo pasirin'i pashure pamadziro akaisa. Panzvimbo rebirding chokuvhenekesa (izvo zvingadai zvakaitwa apo rusvingo akaisa pamusoro), mumwe trowel akachena rakaitirwa kurusvingo uye rayo rekona riri dzinomhanya pasirin'i kuti "vaiguranye" uye kuchenesa rusvingo panguva iyoyowo. Mutsetse iri ipapo ndokudzora aine paintbrush kuti kuchinja musono.
The chipanji (zvazviri kunzi ichiyangarara), ane denderedzwa chimiro uye mafungu pamusoro. zviri wakaiswa kuti vaitsigirwa ane nechepakati handhold uye nehasha kukura mureza trowel. Sponge ari musiyano wezvinyorwa unaku nzira uye kushandiswa anowanzoita pamusoro ceilings uye dzimwe nguva mudzimba dzemukati. Yemanyorero kana kushandisa chipanji; jecha inowedzerwa kunovhengana uye magadzirirwo inonzi jecha-chipanji.
Care anofanira kutorwa kwete kumira zvakananga pasi trowel yako kana kuita izvi sezvo zviri kwazvo, richifadza chaizvo, uye zvine ngozi kuti tsanga jecha muziso rako; izvo akabatanidza kubudikidza kutsamwa kubva madota pamwe. Kubatana uku anogona muvare ziso nyore.
The pasi-pasi uye kunovhengana kwakafanana ne dzose texturing. Zvisinei pashure yunifomu uye nguo kumeso anoiswa pamusoro pasirin'i uye micheto dzinobviswa mu; chinokosha rectangular chipanji ine mubato iri kumhanyira mhiri pasirin'i mune pindana uye tenderera anodudzira. Izvi zvinotora zvimwe unyanzvi uye kudzidzira kuita zvakanaka.
Zvinonyatsorehwa Kutarira chinhu fishscale mhando muenzaniso uri kumusoro, kabati rusvingo, etc. Kunyange zvazvo retarder iri yemanyorero kushandiswa; Kutarisirwa anofanira kutorwa kuchenesa kunze chipanje kwazvo kana apedza sezvo chero varinamire kuti anoomesa mukati zvichava zvisingabviri kubvisa.
Stilts kazhinji zvinoda nesuko ceilings akawanda uye zviri yemanyorero zvakaoma kuisa pamusoro uye kushanda pane masvingo. For pfupi ceilings munhu anogona kushanda mukaka crates. Kuoma kushanda zvachose pasi zvinowanzoita nesuko mabhomba richitsatikira pamusoro uriri, masvingo uye vanhu pazasi.
Ndokusaka wakatsetseka ceilings, kuti kushandisa hapana retardant uye dzimwe nguva kunyange accelerant, zvinoitwa pamberi masvingo. Chakakanganisika varinamire chinogona kuonekwa ngaarayire kubva kumeso varinamire rusvingo apo kunyorova. Chero splatters kubva kumeso sirin'i nyore kunogona ngaarayire kure pachena blueboard asi kwete kubva kare havachipo rusvingo. Care anofanira kutorwa kana akamira pasi trowel yako kana imwe plasterer.
The vakawanda kuoma kushanda sirin'i kumeso fetches wakakwirira mutengo. Nzira kwakafanana norusvingo kumeso asi panguva imwe vachinyara yorusvingo nokuda plasterer.